Ọnụ ụzọ Ngwa China Manufacturers & Suppliers & Factory
Ọnụ ụzọ Ngwa - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka Ọnụ ụzọ Ngwa)
Ọnụ ụzọ Ngwaọrụ Geomagnetic Car Loop Detector
Inye Ike: 2000 sets per month
Akwụkwọ: ISO9001, CE, SGS, TUV
Ihe Nlereanya.: HF-JA-20
Ọnụ ụzọ ngwa ụgbọ oloko ụgbọ oloko zuru ezu bụ ihe ndị a: Voltage: 12V AC / DC + -10% 24V 115V AC + -10% 230V Ike: <2VA Ịga n'ihu mmepụta eletrik: 7A / 250V AC Ogologo oge: 20 ruo 200K Hz Oge nzaghachi: njedebe (ntọala mmepụta ihe) ma ọ bụ ịmezi dozie oge Mmetụta uche: 0.01% ka 0.1% kewara n'ime ọkwa atọ...
Ọnụ ụzọ Ngwaọrụ Ọdụdọ Ntuziaka Push Button Gbanwee
Nkwakọ ngwaahịa: Igbe agba
Inye Ike: 6000 per month
Ọnụ ụzọ na-emepụta Ọdụdọ Push Botton Gbanwee Nkọwa banyere bọtịnụ push A na-eji bọtịnụ mpụpụ a nke ABS ma gosipụta ìhè ọkụ na-eme ka ọ dịkwuo mma ma mara mma. Enwere ike iji ya na ọnụ ụzọ ọnụ ụzọ ámá, ọnụ ụzọ ọha, ụlọ, ụlọ ọrụ, họtel, wdg. Pọpụ Pọpụ Ntanụ Push To Exit Switch Open Door For Security Control Access Isi...
Ọnụ Ụzọ Ọdịdị Aluminom Dị Ngwa Ngwa Ngwa
Ọnụ ụzọ ngwa ngwa ọnụ ụzọ bụ ụdị ọhụrụ nke ụlọ ọrụ mmepụta ngwá ọrụ nke na-ejikọta nchebe okpomọkụ, ịchekwa ike, akara, arụmọrụ dị elu, nguzobe ifufe na nchebe gburugburu ebe obibi. Ụdị ọnụ ụzọ a dị mma maka imepụta ụlọ na n'èzí na ịrụpụta ngwa ngwa. Ibute ụzọ ụzọ a nwere ike ịchekwa ọtụtụ ume nke ikuku na-ekesa,...
Ndozi onwe-gi Imezi ngwa ngwa ngwa ngwa na-agba ọsọ ọnụ bụ ụdị ọhụrụ nke ọnụ ụzọ ngwa ngwa na-arụ ọrụ nkewa dị elu. A na-egbutụ oghere ọnụ ụzọ dum site na igwe mpempe laser dị ukwuu, a na-ejikwa ígwè na-eduzi ígwè. Usoro nchịkwa na-ejide usoro nkà na ụzụ nke dị elu n'ọfịs nke imepụta mmepụta ụlọ ọrụ: nkà na ụzụ...
Akwụnye ihe mgbochi PVC na-emechi ọnụ ụzọ
Akwụnye ihe mgbochi PVC na-emechi ọnụ ụzọ Imezi ngwa ngwa ngwa ngwa na-agba ọsọ ọnụ bụ ụdị ọhụrụ nke ọnụ ụzọ ngwa ngwa na-arụ ọrụ nkewa dị elu. A na-egbutụ oghere ọnụ ụzọ dum site na igwe mpempe laser dị ukwuu, a na-ejikwa ígwè na-eduzi ígwè. Usoro nchịkwa na-ejide usoro nkà na ụzụ nke dị elu n'ọfịs nke imepụta...
Ndozi Onwe Onye na-emezigharị na-agbagote Ọnụ Ụzọ
Ndozi Onwe Onye na-emezigharị na-agbagote Ọnụ Ụzọ Imezi ngwa ngwa ngwa ngwa na-agba ọsọ ọnụ bụ ụdị ọhụrụ nke ọnụ ụzọ ngwa ngwa na-arụ ọrụ nkewa dị elu. A na-egbutụ oghere ọnụ ụzọ dum site na igwe mpempe laser buru ibu, ma na-eduzi ụgbọ okporo ígwè ígwè. Usoro nchịkwa na-ejide usoro nkà na ụzụ nke dị elu n'ọfịs nke...
PVC High Speed ​​Self Repair Door
PVC High Speed ​​Self Repair Door Imezi ngwa ngwa ngwa ngwa na-agba ọsọ ọnụ bụ ụdị ọhụrụ nke ọnụ ụzọ ngwa ngwa na-arụ ọrụ nkewa dị elu. A na-egbutụ oghere ọnụ ụzọ dum site na igwe mpempe laser buru ibu, ma na-eduzi ụgbọ okporo ígwè ígwè. Usoro nchịkwa na-ejide usoro nkà na ụzụ nke dị elu n'ọfịs nke imepụta mmepụta...
PVC High Speed ​​Auto Recovery Rolling Door
PVC High Speed ​​Auto Recovery Rolling Door Imezi ngwa ngwa ngwa ngwa na-agba ọsọ ọnụ bụ ụdị ọhụrụ nke ọnụ ụzọ ngwa ngwa na-arụ ọrụ nkewa dị elu. A na-egbutụ oghere ọnụ ụzọ dum site na igwe mpempe laser buru ibu, ma na-eduzi ụgbọ okporo ígwè ígwè. Usoro nchịkwa na-ejide usoro nkà na ụzụ nke dị elu n'ọfịs nke...
Ịkwụ ụgwọ nchekwa nke onwe gị
Oghere Ndozi Onwe Onye PVC Ịgbanwu
Oghere Ndozi Onwe Onye PVC Ịgbanwu Imezi ngwa ngwa ngwa ngwa na-agba ọsọ ọnụ bụ ụdị ọhụrụ nke ọnụ ụzọ ngwa ngwa na-arụ ọrụ nkewa dị elu. A na-egbutụ oghere ọnụ ụzọ dum site na igwe mpempe laser buru ibu, ma na-eduzi ụgbọ okporo ígwè ígwè. Usoro nchịkwa na-ejide usoro nkà na ụzụ nke dị elu n'ọfịs nke imepụta...
Ebe nchekwa Zipper PVC Roller Onwe Repair Door
Ebe nchekwa Zipper PVC Roller Onwe Repair Door Imezi ngwa ngwa ngwa ngwa na-agba ọsọ ọnụ bụ ụdị ọhụrụ nke ọnụ ụzọ ngwa ngwa na-arụ ọrụ nkewa dị elu. A na-egbutụ oghere ọnụ ụzọ dum site na igwe mpempe laser buru ibu, ma na-eduzi ụgbọ okporo ígwè ígwè. Usoro nchịkwa na-ejide usoro nkà na ụzụ nke dị elu n'ọfịs nke...
Ọnụ ụzọ ngwa ngwa Induction Radar
Nkwakọ ngwaahịa: Ọfụfụ + Kaadị + Bubble akpa
Min. Nhazi: 50 Set/Sets
Ọnụ ọkụ ngwa ngwa Radar Nkọwa: Ụdị: Hofic Technology: Microwave processor Jide oge: 0,5s Nchedo: IP54 Na-enyefe ugboro: 24.125GHz Ogologo nrụnye kachasị elu: <mita 5 Izi ike ike: <5mw / cm2 Ike ike: <1W (VA) Ebe ntinye: 0-90 °
Ogwe Udo Nwepu nke PVC Nwepu Oghere
Ogwe Udo Nwepu nke PVC Nwepu Oghere Imezi ngwa ngwa ngwa ngwa na-agba ọsọ ọnụ bụ ụdị ọhụrụ nke ọnụ ụzọ ngwa ngwa na-arụ ọrụ nkewa dị elu. A na-egbutụ oghere ọnụ ụzọ dum site na igwe mpempe laser buru ibu, ma na-eduzi ụgbọ okporo ígwè ígwè. Usoro nchịkwa na-ejide usoro nkà na ụzụ nke dị elu n'ọfịs nke imepụta...
Idozi Onwe Onye Zipper Ụdị Ọpụpụ Dị Elu
Idozi Onwe Onye Zipper Ụdị Ọpụpụ Dị Elu Imezi ngwa ngwa ngwa ngwa na-agba ọsọ ọnụ bụ ụdị ọhụrụ nke ọnụ ụzọ ngwa ngwa na-arụ ọrụ nkewa dị elu. A na-egbutụ oghere ọnụ ụzọ dum site na igwe mpempe laser buru ibu, ma na-eduzi ụgbọ okporo ígwè ígwè. Usoro nchịkwa na-ejide usoro nkà na ụzụ nke dị elu n'ọfịs nke imepụta...
Ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ịgbanye ngwa ngwa PVC Shutter
Ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ịgbanye ngwa ngwa PVC Shutter Imezi ngwa ngwa ngwa ngwa na-agba ọsọ ọnụ bụ ụdị ọhụrụ nke ọnụ ụzọ ngwa ngwa na-arụ ọrụ nkewa dị elu. A na-egbutụ oghere ọnụ ụzọ dum site na igwe mpempe laser buru ibu, ma na-eduzi ụgbọ okporo ígwè ígwè. Usoro nchịkwa na-ejide usoro nkà na ụzụ nke dị elu...
Ụlọ Ọrụ Nrụpụta Ọrụ nke Ụlọ Ọrụ na-arụpụta Ụlọ Ọrụ
Ụlọ Ọrụ Nrụpụta Ọrụ nke Ụlọ Ọrụ na-arụpụta Ụlọ Ọrụ Imezi ngwa ngwa ngwa ngwa na-agba ọsọ ọnụ bụ ụdị ọhụrụ nke ọnụ ụzọ ngwa ngwa na-arụ ọrụ nkewa dị elu. A na-egbutụ oghere ọnụ ụzọ dum site na igwe mpempe laser buru ibu, ma na-eduzi ụgbọ okporo ígwè ígwè. Usoro nchịkwa na-ejide usoro nkà na ụzụ nke dị elu n'ọfịs...
Ịkụkwa ikike ịchekwa Nrụpụta nke Onwe Gị nke Ụlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ntọala
Ịkụkwa ikike ịchekwa Nrụpụta nke Onwe Gị nke Ụlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ntọala Imezi ngwa ngwa ngwa ngwa na-agba ọsọ ọnụ bụ ụdị ọhụrụ nke ọnụ ụzọ ngwa ngwa na-arụ ọrụ nkewa dị elu. A na-egbutụ oghere ọnụ ụzọ dum site na igwe mpempe laser buru ibu, ma na-eduzi ụgbọ okporo ígwè ígwè. Usoro nchịkwa na-ejide usoro nkà na ụzụ nke...
Ichekwa ikike iji wepu onwe-ya
Ichekwa ikike iji wepu onwe-ya Imezi ngwa ngwa ngwa ngwa na-agba ọsọ ọnụ bụ ụdị ọhụrụ nke ọnụ ụzọ ngwa ngwa na-arụ ọrụ nkewa dị elu. A na-egbutụ oghere ọnụ ụzọ dum site na igwe mpempe laser buru ibu, ma na-eduzi ụgbọ okporo ígwè ígwè. Usoro nchịkwa na-ejide usoro nkà na ụzụ nke dị elu n'ọfịs nke imepụta mmepụta...
Nwepụta onwe-nrụpụta PVC na-ewepụta onwe ya ngwa ngwa
Nwepụta onwe-nrụpụta PVC na-ewepụta onwe ya ngwa ngwa Nwepụta onwe-nrụpụta PVC na-ewepụta onwe ya ngwa ngwa ngwa ngwa ọnụ ụzọ dị elu bụ ụdị ọhụrụ nke ọnụ ụzọ ngwa ngwa na-arụ ọrụ nkewa dị elu. A na-egbutụ oghere ọnụ ụzọ dum site na igwe mpempe laser buru ibu, ma na-eduzi ụgbọ okporo ígwè ígwè. Usoro nchịkwa na-ejide...
Nwepụta onwe onye nrụpụta PVC ngwa ngwa ngwa ngwa Zipper Rolling Door
Nwepụta onwe onye nrụpụta PVC ngwa ngwa ngwa ngwa Zipper Rolling Door Ụlọ nkwụnye onwe ya bụ ụdị ọhụrụ nke ọnụ ụzọ ngwa ngwa na-arụ ọrụ nkewa dị elu. A na-egbutụ oghere ọnụ ụzọ dum site na igwe mpempe laser buru ibu, ma na-eduzi ụgbọ okporo ígwè ígwè. Usoro nchịkwa na-ejide usoro nkà na ụzụ nke dị elu n'ọfịs nke...
Nwepụta onwe-nrụpụta PVC na-arụ ọrụ nke onwe-ya High Speed ​​Zipper Rolling Door
Nwepụta onwe-nrụpụta PVC na-arụ ọrụ nke onwe-ya High Speed ​​Zipper Rolling Door Ụlọ nkwụnye onwe ya bụ ụdị ọhụrụ nke ọnụ ụzọ ngwa ngwa na-arụ ọrụ nkewa dị elu. A na-egbutụ oghere ọnụ ụzọ dum site na igwe mpempe laser buru ibu, ma na-eduzi ụgbọ okporo ígwè ígwè. Usoro nchịkwa na-ejide usoro nkà na ụzụ nke dị elu...
Ọnụ ụzọ ngwa ngwa eji eme njem ngwa ngwa maka ngwa ahia
Nchịkọta Ọsọ Ọsọ nke PVC Ọnụ ụzọ na-agba agba dị elu bụ ezigbo ihe inyeaka gị na azụmaahịa gị, needchọrọ ịbawanye arụmọrụ nke ije ije gị na mbufe, na-ebugharị, na-ekwurịta okwu? Doorzọ ngwa ngwa dị otú a nwere ike igbocha gị. Ngwa: * N'ime, n'èzí nke na-arịọ na-eguzogide ọgwụ ikuku / okpomoku. * Industrylọ ọrụ...
Ihe owuwu ngwa ngwa ulo nke PVC
Nchịkọta Ọsọ Ọsọ nke PVC Na ndụ anyị kwa ụbọchị, You na-ebi n’ụwa nke ọnụ ụzọ mejuputara ngwa ngwa mana ị naghị ahụ ya, Ekele dịrị ọnụ ụzọ a ngwa ngwa ka anyị ghara ịkwatu ọnụ ụzọ mana ọ bụ naanị na-abanye n'ihi na enwere sensọ na sensọ geomagnetic. Kwere ya ma ọ bụ na ọ bụghị, ọnụ ụzọ awara awara na-azọpụta anyị...
Ọnụ ụzọ Ngwa Ọnụ ụzọ ngwangwa Ọnụ ụzọ Ọnụ Ụzọ Ngbanwe Ọnụ ụzọ mbata Ọnụ Ụzọ Ígwè Ọnụ ụzọ mgbochi Ọnụ ụzọ Nnukwu PVC